စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ Motivation ရလာဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | Mycanvas
စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ Motivation ရလာဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒီနေ့မှာ‌တော့ ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှု (Extrinsic motivation) ထက်ပိုပြီး စွဲမက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှု (Intrinsic motivation) အကြောင်းကို ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Intrinsic motivation မှာတော့ အဓိကကျတဲ့ အချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှု (Intrinsic motivation) နဲ့ ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှု (Extrinsic motivation) တို့ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေကို မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Monday တုန်းက တင်ပေးသွားတဲ့ Post ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်။
Intrinsic Motivation အချက် (၁) : ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (Autonomy) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အလုပ်ဒဏ်ဖိစီးခြင်းကိုရှောက်ရှားစေနိုင်ပြီး နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက်ထိရောက်မှုရှိစေတဲ့အပြင် လူရောစိတ်ပါကျန်းမာစေဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (Autonomy) ကို 4Ts စည်းကမ်းချက်များဖြစ်တဲ့: Task, Time, Technique နဲ့ Team ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှု (Intrinsic motivation) နဲ့အတူပြုမူကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
4Ts အကြားက အချိန်အဆဟာ တစ်ဦးချင်းစီလိုက်ပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွက်ကြောင့် သင်ဟာ 4Ts ထဲမှ ဘယ် T ကိုစိတ်အဝင်စားဆုံးလဲဆိုတာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခြားသူတွေက သူတို့ရဲ့ target/goal တွေကို သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် “Task” ဆိုတဲ့အချက်ကို အာရုံစိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ချင်တယ်ဆိုပါက ‘Team’ ဆိုတဲ့အပေါ်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၊
Intrinsic Motivation အချက် (၂) : ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု (Mastery)
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို လူတွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလို့ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအတွက်တော့ လူအများဟာ အကန့်အသတ်မရှိပဲဆက်လက်လေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် သင့်လျော်တဲ့အတွေးအခေါ်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်တောင်ခြင်းမှာ အခက်အခဲတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ အရှုံးမပေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Intrinsic Motivation အချက် (၃) : ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)
ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှု (Intrinsic motivation) မှာ ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုဦးတည်ခြင်းထက် ရည်ရွယ်ချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပန်းတိုင်များ၊ စကားလုံးများနှင့်မူဝါဒများဖြင့်ပြသနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။